Nezvedu - Hi Promos - Ningbo Hipromos International Trading Co., Ltd.
Isu tinokumikidza kupa epamusoro-kirasi zvigadzirwa uye sevhisi iyo inofambisa vatengi vedu vanokosheswa kuwedzera bhizinesi ravo kunze kweavo vekunze vatengesi uye kusimudzira kutengesa huwandu, vachipesana nemitengo yedu yemakwikwi uye yakasimba mhando. Tiri kuedza kuvaka hukama hwakasarudzika-hwenguva refu nemumwe mutengi, edza mumwe wako mutsva kuChina kuti tione zvatinogona kukuitira.
Hi Promos yakavambwa muna 2010 ichiburitsa bespoke zvinhu zvekushambadzira uye branded merchandise muNingbo Guta, China, vanobudirira kuva wako wepamusoro mudiwa nekushanda kunovhenekwa, yemahara kuongororwa kwekumhanya mirairo uye zvisingadhuri zvekutumira zvirevo. Tinokurudzira vese vashandi vehunyanzvi mukuenderera mberi nekuvandudza kwebhizinesi redu riine huchokwadi uye huzere mutoro, tichitarisira zvinoshamisa kushambadzira ruzivo mukudzoka.
Isu tiri timu diki inodakadza ine zvishuwo, iwe unofanirwa kuve unofara kushanda nevashandi vedu vekugadzira.
Yekushambadzira kushambadzira kupa inzira inzira chaiyo-inodhura yekushambadzira bhizinesi, masangano kana zviitiko, zvinogadziriswa nemavara anogara kwenguva refu nemufananidzo. Isu tinozvipira kuve neunyanzvi uye nekuchengeta maziso kuti tidzidze zvakawanda nezve zvigadzirwa zvekushambadzira indasitiri, izvo zvinobatsira vatinoshanda navo kuwedzera bhizinesi nezvinhu zvakasarudzika uye nemutengo wakajairika zvinhu. Kusanganisira mabhegi ekusimudzira, nguwani, zvinhu zvemagetsi, zvekuchengetedza zvinhu, zvekunze & zvekufambisa zvigadzirwa, zvemumba zvinopa, zviyeuchidzo, zvichingodaro.
Isu takavavarira kuve wako wega mudiwa uye hofisi muChina kuti tiite izvo zvatinofanirwa kuita semumiriri uye tora mutoro uzere nebasa remhando yepamusoro.
Hofisi: venguva yakazara nyanzvi vanobatana nevagadziri. Hofisi Yako Pano!
Mubhadharo: inotaurirana semwedzi kana dhipoziti. Chengetedza Mari Zvakachengeteka!
Kudzora Kwemhando: 3rd muongorori webato anobhadharwa kuti aongorore. Hunhu Kutanga!
Sourcing: fekitori yakatarwa mutengo unovimbiswa. Mari Kuchengetedza!
Kutakura: kuunza pane-nguva nenzira dzakasiyana dzekutumira, negungwa, nendege, njanji kana kuburikidza nemakadhi (DHL, Fedex).
Iwe unokosha kwazvo kwatiri. Saka tiri kukurudzira timu yedu kuti ibudirire uye nekukurumidza kuita. Sekubatana kwako kwakabudirira uye kwenguva refu, tichaita zvese zvatinogona kuti tiise ruzivo rwedu neruzivo tisingabvumirane nenyaya imwe chete, zvisinei kuti zvine chekuita neUS $ 100 odha kana US $ 1.000.000 odha.
Yakavimbika & Yakatsiga: tinoona, kunzwa, kubata uye kubata padhuze.
Unyanzvi: zvinopihwa zvichave zvakagadzirira muma24hrs kana kukuchengetedza mhinduro chaidzo.
Ngatitaurei Zvino. Yako yekutanga sarudzo yezvakagadzirirwa zvakasarudzika kupaaways uye zvekushambadzira zvinhu muChina - Hi Promos. Email kwatiri nhasi kukumbira rubatsiro.